BAYDHABO, Soomaaliya - Fahfaahino dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxyo ka dhacay magaaladda Baydhabo ee xarunta KMG maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga.
Ugu horeyn, qarax Miino oo lala beegsaday shacab ku sugnaa Goob ay kusoo bandhigayeen ciyaar Dhaqameed oo ku taala xaafada Degaan-dega ee caasimad goboleedka Bay, waxaana ku dhimatay 2 ruux, iyadoo ay ku dhaawacmeen 13.
“Qaraxa waxaa uu ahaa Miino bartamaha meesha wax lagu soo bandhigayay lagu aasay. Dadka meesha joogay oo soo bandhigayay ciyaar dhaqameed waxay isugu jireen Rag iyo Dumar,” ayuu yiri goobjooge la hadlay Warsidaha Garowe Online.
Amaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo ciidamada Ilaaladda Villa Somalia la geeyay..
Soomaliya 29.12.2018. 14:23
Mursal iyo Lafta Gareen oo wadahadal ku yeeshay Baydhabo [Sawirro]
Soomaliya 20.01.2019. 10:32